4951 पटक पढिएको
धरान । धरानको ६ नं. वडामा दिन प्रतिदिन अपराधिक कृयाकलाप बढी रहेको छ । ६ नं. वडामा रहेका सबै विद्यालयहरुमा चोरी भइसकेको छ भने पानवारीको मुख्य चोकमा रहेको सहकारी संस्था फोडेर १५ लाख रुपैया चोरी भयो ।
३ दिन अघि दिउँसै घरमा बसिरहेकी वृद्धामाथी आक्रमण गरेर सुनको गहना लुटपाट भएको छ । यी सबै घटनाले पानवारीमा असुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधी तदारुकताका साथ नलागेको कारणले पनि अपराधी उम्किरहेको स्थानीयको बुझाइ छ । ७५ वर्षिय वृद्धाको घाटी काटेर सुन लुटपाट भएपछि पानवारीबासी त्रसित भएका छन् । प्रहरीले अपराधीको पहिचान भइसकेको बताएको छ तर अझै पक्राउ गर्न भने सकेको छैन ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका इन्सपेक्टर हेमराज ओलीले अपराधीको पहिचान भएको बताउनुभएको छ । पानवारीमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा चोरीका घटना हुँदापनि अहिलेसम्म चोरको पहिचान हुन सकेको छैन । अपराधीको पहिचान कहिल्यै नहुने र दिनदहाडै घरमा आक्रमण गरेर गहना लुटीएपछि आफुहरु असुरक्षित भएको स्थानीय निर्मला खड्का बताउनुहुन्छ । गत मंसिरमा पानवारीका मुख्य चोकमा रहेको निशान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय फोडेर करिब १५ लाख चोरी भयो तर अहिलेसम्म अपराधी पक्राउ परेको छैन । सिसि क्यामराले सहकारी फोडेको भिडियो कैद गरेको छ तर पनि अपराधीको पहिचान गर्न सुरक्षा निकायले सकिरहेको छैन ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका इन्पेक्टर हेमराज ओलीले कतिपय घटनाका संलग्नलाई पक्राउ गरीएको बताउँदै केही केही घटनाका अपराधी पक्राउ गर्न गाह्रो हुने बताउनुहुन्छ । पानवारीमा यस अघि पनि दिउँसै घर फोडेर चोरी गर्ने, स्कुलमा पसेर सामानहरु चोरी गर्ने जस्ता घटना भइहरका छन् तर अहिलेसम्म यस्ता ठूलो चोरीमा संलग्न कोही पक्राउ परेका छैनन् । जसले गर्दा स्थानीय त्रसित छन् । धरान–६ का विनोद विश्वकर्माले अपराधीलाई चाडो पहिचान गरी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो –‘अपराधी कहिले पत्ता लाग्छन् ?’
तर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् अपराधी किन पक्राउ नगरेको ? पानवारी प्रहरी चौकीमा किन प्रहरीको संख्या नबढाएको ? प्रहरीलाई किन सक्रिय नगराएको ? तर उनै जनताले जिताएर पठाएको जनप्रतिनीधि भने जवाफ दिन चाहादैनन् । वडाध्यक्ष भुवनसिं बस्नेत बोल्न चाहानु भएन । उहाँले भन्नुभयो –‘के बोल्ने, कति बोल्ने ? म बोल्दीन ।’ उहाँले चोरीका घटनाका सम्बन्धमा केही प्रतिक्रिया दिन मान्नुभएन ।
पानवारीमा दिनदहाडै ढाेका फुटाएर चाेरी
सरस्वती स्कुलमा भएकाे चाेरीकाे भिडियाे